Warar - Kordhi inta jeer ee kormeerka shaqaalaha la xiriira silsiladda qabow ee la soo dejiyo
Kordhi inta jeer ee kormeerka shaqaalaha la xiriiro silsiladda qabow ee la soo dejiyo
Bishii Diseembar 9, Zhejiang waxay qabatay shirkii 58aad ee ka hortagga cudurka faafa iyo xakameynta shir jaraa'id. Dadka ay khuseyso ee masuulka ka ah Xafiiska Kahortaga iyo Xakamaynta Kooxda Hogaaminta Gobolka iyo Xafiiska Kormeerka Suuqa Gobolka ayaa soo bandhigay xaalada isku dubaridka iyo kor u qaadida kahortaga iyo xakamaynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada.
Weriyuhu wuxuu ka bartay shirkii jaraa'id in, si wax ku ool ah looga hortago khataraha qarsoon ee "isu gudbinta jirka ee qof ilaa qof", Zhejiang wuxuu kormeeri doonaa kormeerka, rarka iyo dejinta, gaadiidka, keydinta, farsamaynta, iyo iibinta cuntada silsiladda qabow ee la soo dejiyo. , badeecadaha kale ee dibada laga keeno, shandadaha rakaabka soo galaya iyo waxyaabo kale. Maaddaama ay yihiin shaqaalaha muhiimka ah ee kahortagga iyo xakamaynta cudurrada, shaqaalaha rarka iyo dejinta iyo xiriiriyeyaasha kale waxay si adag u fuliyaan shuruudaha ilaalinta, waxay sii wadaan inay sameeyaan kormeer caafimaad oo maalinle ah, ayna kordhiyaan inta jeer ee baaritaanka nucleic acid. Isla mar ahaantaana, xooji baaritaanka nucleic acid ee maqaallada gelitaanka iyo xirfadleyda ku lugta leh.Tirada shaybaarrada xirfadleyda, shaybaarrada maqaalka, iyo shaybaarrada deegaanka ee lagu tijaabiyo degmo kasta (magaalo, degmo) ​​toddobaad kasta waa inaysan ka yarayn 30.
Shirka Jaraa'id ayaa ogeysiiyay sida loola tacaalayo cuntadii silsiladda qabow ee dhawaan la keenay ee nucleic acid-positive:
Markay ahayd 21:00 fiidkii Diseembar 2, shaybaarrada kormeerka maalinlaha ah ee silsiladda cuntada qabow ee ay soo ururiso Xarunta Yuhuan ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Suuqa Khudaarta ee Chengguan ayaa laga helay nooc lugta dambe ee doofaarka baraf ah oo laga keenay Brazil kaas oo lagu hubiyey inuu yahay cusub coronavirus nucleic acid. Ka dib markii lagu raad raacay nidaamka "Zhejiang Cold Chain", badeecooyinka ku lugta leh waxay soo galeen waddanka iyagoo sii maraya Dekedda Yangshan ee Sebtember 28. Aagga maxalliga ah wuxuu si dhakhso leh u qaatay tallaabooyin deg-deg ah sida kaydinta xamuulka, kormeerka shaqaalaha iyo go'doominta, iyo baabi'inta goobta, iyo fulinta tijaabooyinka nucleic acid ee deegaanka iyo shaqaalaha ka baxsan suuqa habeenkii. Degmooyinka iyo gobollada ku habboon ee magaalada Taizhou ee ku lug leh wareegga wax soo saarka isla markiiba waxay qabteen xamuul iyo dabagal shaqaale, baaritaan iyo qashin. Xafiiska Ka Hortagga iyo Xakamaynta ayaa sidoo kale ogeysiiyay gobollada iyo magaalooyinka deriska la ah. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, magaalada Taizhou waxay uruurisay wadar ahaan 174 shaybaar oo isku nooc ah badeecooyin ah, baakado dibedda ah, iyo bey'ad dibadda ku lug leh, waxaana la aqoonsaday 3304 qof oo ku lug lahaa. Natiijooyinka baaritaanka nucleic acid dhammaantood waxay ahaayeen kuwo taban.
Bishii Diseembar 5keedii, Wuxi City, Gobolka Jiangsu, waxay ogeysiisay shirkad in baakadka dibedda ee hilibka lo'da ee qabow ee lafta leh ee shirkaddu soo dhoofisay ay tijaabisay inuu yahay wax cusub oo coronavirus ah. Zhejiang wuxuu isla markiiba abaabulay Hangzhou, Ningbo, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Zhoushan, Taizhou iyo todobo meelood oo kale oo ku lug leh isla badeecadaha si ay u fuliyaan sambal iyo tijaabo deg deg ah, kormeerka caafimaadka shaqaalaha iyo jeermiska, waxayna ku shaabadeeyeen alaabada si aan qatar lahayn.Laga soo bilaabo Diseembar 8, 4,975 muunad oo ah alaabooyin la xidhiidha iyo baakadaha, bay'ada dibedda iyo xirfadlayaal ayaa la baaray oo la tijaabiyey, natiijooyinka baaritaanka nucleic acid dhammaantoodna waa kuwo xun.
Si loo hagaajiyo habka maaraynta-loop ee maaraynta cuntada silsiladaha qabow laga keeno, Zhejiang waxay ku sameysay “hawlgal buuxa” cuntooyinka silsiladda qabow ee laga soo waarido ee ka soo gala dekedaha Zhejiang ama ku sii qulqulaya Zhejiang iyada oo loo marayo dekedaha Zhejiang si loo keydiyo, loo shaqeeyo (qandaraasle), iyo iibin. La xakameeyay, oo aan laga tagaynin ”maaraynta-loop maaraynta, si cad u sheegay" afar waa in aan ", kuwaas oo:
Kuwa aan lahayn baaris iyo shahaado karantiil ah looma oggola in la suuq geeyo, kuwa aan lahayn warbixinta baaritaanka nucleic acid looma oggola in la suuq geeyo, kuwa aan haysan shahaadada jeermiska jeermiska lama oggola in la suuq geeyo, iyo kuwa aan lahayn sumadda isha la raadsan karo ee silsiladda qabow. cuntooyinka looma oggola in la suuq geeyo, taasoo si wax ku ool ah u yareyneysa halista faafitaanka faafa ee cuntooyinka silsiladda qabow ee la soo dejiyo.
Intaa waxaa dheer, Zhejiang wuxuu sidoo kale xoojin doonaa ka hortagga iyo xakamaynta fayraska taajka cusub ee alaabada la soo dhoofiyo iyo shaqaalaha la xiriira. Marka laga eego kiisaskii ugu dambeeyay ee gudaha, jawiga heerkulka hooseeya ee xilliga qaboobaha, coronavirus-ka cusub wuxuu ku faafi karaa nidaamyada saadka ee aan qabowga ahayn, taas oo soo bandhigaysa shuruudaha cusub ee shaqada difaaca jirka. Isaga oo diiradda saaraya sii wanaajinta "isha kormeerka iyo xakamaynta + go'doominta adag ee adag + xakamaynta caqliga saxda ah", Zhejiang waxay dejisay tilmaamo ka hortagga iyo xakamaynta qodobbada soo galaya iyo shaqaalaha la xiriira. Waxaa ka mid ah, dhammaan badeecadaha la soo dhoofiyo ee lagu daabulo duulimaadyada xamuulka ee caalamiga ah ama la soo marsiiyo dekadaha dalka, marka laga reebo badeecadaha waaweyn, waa kuwo taxaddar leh oo gebi ahaanba lagu nadiifiyey habka gaadiidka iyo xirmooyinka badeecadaha dibadda. dusha sare ee shandadaha la hubiyey ee rakaabka soo galaya ayaa la mariyaa suunka xamuulka ee garoonka Mabda 'ahaan, jeermis isku mid ah ayaa loo baahan yahay ka hor inta aan la soo saarin. Shaqada jeermiska lagu dilo waxay raacdaa mabaadi'da amniga, waxtarka, iyo hawlgalka ku habboon, taas oo aan yareynin oo keliya halista fayraska taajka cusub ee lagu soo dejinayo badeecadaha dibadda laga keeno, laakiin sidoo kale yareynaya isku xirnaanta hawlgallada aan loo baahnayn iyo kharashyada.
Sida laga soo xigtay qofka ay khusayso ee masuulka ka ah Xafiiska Kooxda Kahortaga iyo Xakamaynta ee Gobolka, Zhejiang ma helin warbixinno kiisas maxalli ah oo cusub oo la xaqiijiyey 175 maalmood oo xiriir ah; waxaa hada jira 4 kiis oo laxaqiijiyey oo lagu daaweeyey isbitaalka, iyo 27 kiis oo ah infekshano aan caadi ahayn ayaa wali ku jira kormeer caafimaad, dhammaantoodna waxay ka imaanayaan dibedda.
Sababtoo ah dhacdooyinka kiisaska goosgooska ah ee Manzhouli City ee Gudaha Gobolka Mongolia, Zhalai Nuoer ee Hulunbuir City, Degmada Pidu iyo Chenghua District of Chengdu City ee Gobolka Sichuan, sida ku cad shuruudaha nidaamka xakamaynta caqliga ee Zhejiang ee caadiga ah, kuwa oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwo halistoodu sarrayso ama khatar dhexdhexaad ah Kuwa imanaya Zhejiang oo ku soo noqonaya Zhejiang oo ka soo jeeda gobolka, haddii ay awoodi kari waayaan inay keenaan caddayn tijaabo ah oo nukliyeer ah oo tijaabo ah 7 maalmood gudahood ka hor intaanay iman meesha ay u socdaan, ama "koodh caafimaad" cagaaran nambarka ay ku jirto macluumaadka, waxaa lagu hagaajin doonaa meel cayiman sida barta adeegga ee ballaaran ee maxalliga ah ee baaritaanka nukliyeerka; Natiijadu waa mid taban Waxay ku socon kartaa si xor ah oo nidaamsan iyada oo la raacayo qiyaasta qiyaasta heerkulka caadiga ah iyo ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Intaa waxaa dheer, iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in cudurka faafa ee Kashgar, Xinjiang la xakameeyay, Zhejiang hoos loogu dhigay heer khatar hoose ku ah gobolka oo dhan, mar dambe uma baahna shaqaalaha ka taga Kalai iyo Zhejiang inay ku laabtaan Zhejiang si ay u bixiyaan shahaadada baaritaanka nukliyeerka xun. Kuwa ku soo laabanaya Zhejiang ee ka soo jeeda Dongjiang Port District of Tianjin City, Binhai New Area iyo Shanghai Pudong New Area, kuwaas oo loo yareeyay halista hoose, shahaadada baaritaanka nukliyeerka xun ee nukliyeerka looma baahna mar dambe.
Tan iyo markii uu dillaacay cudurka, Zhejiang wuxuu si isdaba joog ah u ogaaday shaqaalaha taaj cusub ee virus-ka qaba maraakiibta caalamiga ah ee lagu hagaajiyay Hong Kong. Xoojinta ka hortagga cudurrada faafa ee qaybtan ayaa qayb muhiim ah ka ah soo gelinta difaaca shisheeyaha. Iyada oo ku saleysan xaaladaha dhabta ah, aagagga xeebta ee khuseeya waxay dejiyeen tallaabooyin maareyn caalami ah oo ku saabsan dayactirka maraakiibta ganacsiga, oo ay weheliso cilmi baaris ballaadhan iyo xukun ku saabsan marinnada maraakiibta, dekedda la dego, shaqaalihii baddalayay, iwm. Iyadoo la raacayo shuruudaha "kormeerka buuxa, kormeerka marka hore, kormeerka marka hore, kormeerka marka hore, iyo dayactirka ugu horreeya", tijaabada nucleic acid ee shaqaalaha ayaa si buuxda loo daboolay ka hor inta uusan markabka caalamiga ah soo gelin warshadda hagaajinta; Isbedelada shaqaalaha lama ogola ka hor intaan natiijooyinka baaritaanka la soo saarin, dayactirkana lama ogola inuu shaqeeyo. Isla mar ahaantaana, shirkadaha dayactirka maraakiibta waxaa looga baahan yahay inay abuuraan nidaam diiwaangelin dil oo dhammaystiran iyo soo tebin, howlaha dayactirka waxaa la fulin karaa oo keliya dilka ka dib.